मासु खानुहुन्छ ? यी कुराहरु थाहा पाइराख्दा राम्रो
मानिसको भोजनबाट चय अपचय भई शरीरका लागि दैनिक जीवनचर्या सुचारु गर्न मानिसले दैनिक गर्ने क्रिया–प्रक्रियाबाट मानिसको शरीरमा क्षय हुने शक्ति, तन्तुको पुनः निर्माणका लागि, कार्वोहाइड्रेट, बोसो, प्रोटिन र खनिजको निरन्तर आपूर्ति हुन आवश्यक हुन्छ । यी सबै पोषक तत्वको स्रोत वनस्पतिजन्य तथा पशुजन्य मानिन्छ । मानिसले गर्ने दैनिक शारीरिक तथा मानसिक क्रिया प्रतिक्रियाबाट शरीरबाट तन्तुहरु नष्ट हुने गर्छन् जसको बनोटमा प्रोटिनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । भनिन्छ, प्रोटिनका स्रोत वनस्पतिजन्य पनि हुन्छन् तर पशुजन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रोटिन भने उत्कृष्ट मानिन्छ । जुन हामी पशु पंक्षीबाट प्राप्त गर्दछौं ।
मासु भन्नाले हाम्रा धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज अनुसार उपभोग गर्न हुने पशुपंक्षीहरु वध गरी तीनको शरीरबाट पाउने उपभोग्य तन्तुलाई बुझिन्छ । तर आज हाम्रा परिवेशमा जसरी पशुपंक्षीहरु वध गरिन्छ अनि जसरी मासुको बिक्री वितरण गरिन्छ त्यस्ता स्रोतबाट प्राप्त मासु हामीले सेवन गर्दा के हामी साँच्चिकै मासुबाट प्राप्त हुने भनिएको उत्कृष्ट प्रोटिन प्राप्त गर्न सक्छौं ।
हाम्रा वधस्थल तथा मासु बिक्री गरिने पसल कस्ता छन् ?
राँगा प्रजाती वध गरिने स्थल प्रायजसो नदि किनारका वगर हुन भन्दा फरक पर्देन, त्यसको लागि काठमाडौं विष्णुमती किनार हेरे पुग्छ । यसरी यस्ता ठाउँमा वध गरिएको राँगाहरुको मासु धोई पखाली गर्न आवश्यक पानी पनि त्यही विष्णुमती खोलाको प्रयोग गरिन्छ भन्न किन आइतबार कुर्ने र !
तर यसरी बगर–बगरमा गरिने वध, प्रत्येक घर टोलमा गरिने वधको निरिक्षण तथा अनुगमन गर्न न त प्रयाप्त जनशक्ति नै छ न त भौतिक स्रोत साधन नै ।
आजको हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पशुवधशाला ऐन २०५५, नियमावली २०५७, तथा निर्देशिका २०६४ जारी गरिएको छ, जसमा प्रत्येक किसिमका पशुपंक्षी बध गर्नुअघि स्वस्थ्य अस्वस्थ्य भए नभएको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसरी बगर–बगरमा गरिने वध, प्रत्येक घर टोलमा गरिने वधको निरिक्षण तथा अनुगमन गर्न न त प्रयाप्त जनशक्ति नै छ न त भौतिक स्रोत साधन नै । यसरी व्यवसायी आफैले आफुखुसी वध गरी भाग लगाइ तयार पारेको मासु नजिकै बगेको खोलाको पानी प्रयोग गरी सफा गरेको मासु कति स्वच्छ, सफा र जनस्वास्थ्यको लागि स्वस्थ्य होला यक्ष प्रश्न त यही छ ।
अझ हाम्रा परम्परागत मासु बिक्री गर्ने चलन भुईंमै खसी बोका वध गर्ने गुन्द्री तथा प्लास्टिक ओछ्याएर पनि मासु पसल थाप्ने, रातो लुगाले मासु छोपेर राख्ने अनि छिन छिनमा पानी छर्कने चलन त परम्परागत नै छन् । यसले त्यो मासुलाई कति स्वच्छ सफा स्वस्थ्य राख्न मद्दत गर्ला ?
मासु विज्ञानको सिद्धान्तले भनेको छ, पंक्षी, प्रजाती तथा बंगुर प्रजाती बाहेक वध गरेपछि त्यसको छाला छुट्याउनुपर्छ । टाउको, खुट्टाको तल्लो भाग अनि आन्द्रा भुँडी भित्रियांश, मुटु, कलेजो, फोक्सो, फियो, मृगौला पनि । यसपछि बाँकी रहेका वध गरिएको पशुका भाग वर्गिकरण गरी मात्र तयार हुने मासुलाई मासु भनिन्छ । यी बाहेकका माथि उल्लेखित अंश बिक्रेताले बिक्री गर्न चाहे छुट्टै राखी बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ हाम्रो आफ्नो प्रचलनमा वध गर्न कानुनीरुपमा अनुमति दिइएका पशु तथा तीनका लीग अनुसार वध गरी तयार पारिएको मासु के साँच्चै उपभोक्तले पाउँछन होला ? यो समस्या चौपाया प्रजातिमा बढी छ । मानिन्छ खसि/राँगाका मासुको मुल्य बढी नै हुन्छ । खसी भनि बेचिने गरेको मासुमा बोका, बुढी बाख्री वा भेडा भेडीको मासु नमिसाइएको भन्ने यकीन पो कसरी गर्ने ? राँगाको मासु भनि बिक्री गर्न राखिएको मासुमा दूध दिंदा दिंदा थाकेको बुढी भैंसी पर्दैन पो कसरी भन्ने ?
मासु विज्ञानको सिद्धान्तले भनेको छ, पंक्षी, प्रजाती तथा बंगुर प्रजाती बाहेक वध गरेपछि त्यसको छाला छुट्याउनुपर्छ । टाउको, खुट्टाको तल्लो भाग अनि आन्द्रा भुँडी भित्रियांश, मुटु, कलेजो, फोक्सो, फियो, मृगौला पनि ।
यसको समाधान के ?
प्रत्येक शहरी क्षेत्र, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रमा हाल बध गरिने पशुको किसिम, मासुको खपत अनुसारका क्षमताका व्यवस्थित वधशाला, वधस्थल निर्धारण गरी स्तरोनत्ति वा नयाँ निर्माणको प्रक्रिया, निजी व्यवसायी सहकारी व्यवसायीको समितिको अग्रसरतामा निर्माण अनि सञ्चालन गर्ने हो कि ।
यसका पूर्वाधार के हुन सक्छन् ?
१) मासुजनीत रोग, मासु उत्पादन, मासु बिक्री वितरणबारे सूचना प्रवाह गर्ने ।
२) मासु उत्पादन वितरण, पशु वधशाला संचालन र मासु परीक्षण सम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्थाबारे सरोकारवालालाई सुसूचित गर्ने ।
३) नगरपालिका क्षेत्रमा मासु बिक्री गर्न चाहने व्यवसायीले सम्बन्धित नगरपालिकामा पूर्व स्वीकृति लिई मासु पसल सञ्चालनको मापदण्ड पूरा गरी मासु पसल संचालन गर्ने ।
४) पशु वधशालाबाट प्रमाणित एवं वर्गिकृत मासु, मासु पसलसम्म रेफ्रिजरेटर भ्यानमा राखी पुर्याउने जिम्मा सम्बन्धित वधशाला संचालकको हुने व्यवस्था गर्ने ।
५) मासु पसलमा नियमित बिक्री पछि पनि बाँकी रहन गएको मासु डिप फ्रिजमा संरक्षण गरी राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६) प्रत्यक मासु पसलमा विक्रि गर्न राखीएको मासुमा मासुको स्रोत, गुणस्तर अंकित चिन्ह प्रष्ट देखिने हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
७) वधस्थलमा वध गर्न ल्याइने पशुको वध पूर्वको स्वास्थ्य परीक्षण तथा वधपश्चात परीक्षण पछि मात्र त्यस्ता पशुबाट प्राप्त हुने मासु स्वस्थ्य अस्वस्थ अवस्थाअनुसार वर्गीकृत चिन्ह अंकित गरी मात्र मासु पसलसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने छ ।
सैद्धान्तिक रुपमामाथि उल्लेखित तथ्य सहज देखिए पनि हाम्रा आफ्ना सामाजिक परिवेसमा सहज छैन । तथापि हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकोले अन्य विश्वका सदस्य राष्ट्रले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार हामी पन्छिन सक्दैनौं पनि । यसकारण गर्न के पो सकिन्छ ? वर्तमानको समग्र मासु सम्बन्धि हालको ज्ञानको मूल्याङ्कन पूर्वाधारका स्थिति, उपभोक्ताको संचेतनाको स्थिति हेरी सरोकार पक्षलाई यथोचित अभिमुखिकरणका कार्यक्रम संचालन पो गर्ने हो की ।
यस बाहेक सम्बन्ध पक्षलाई सहभागितामुलक प्रशिक्षण दिने हो की ? वधशाला निर्माण मासु पसल संचालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारका लागि स्थानीय निकाय, सरकारी वा गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट आर्थिक अनुदान, सामग्री अनुदान, सो सम्भव नभए अनुदान वा सहुलियतको रुपमा ऋृण व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस बारे सोच्ने बेला आएको छ । न्यूनतम रुपमा यतिसम्म गर्न सकिएमा उपभोक्ताले हालको अवस्था भन्दा केही स्वच्छ, सफा र स्वस्थ्य मासु पाउने छन् । किनकी सुधारका सम्भावना अनन्त हुने गर्छ ।